Author: Vudocage Kazrabar
Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Deadly blasts rock Mogadishu near presidential palace December 22, Sections of this page. Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Dastuurks oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Waxaa uu sidoo kale sheegay in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed.
In la badalo dastuurka, waxay qeyb ka mid ahayd heshiis ay beesha caalamka taageertay, oo lagu soo afjaray rabshado uu dhiig badan ku daatay, soomalia ka dhashay doorasho natiijadeeda la isku khilaafay laba sanno ka hor.
Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u sonalia. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Chsub madax-bannaan.
Gabadha qortay dastuurka Soomaaliya waxay rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee la yiraahdo Rastafari. Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Diinta ay aaminsan tahay haweenaydaas. Somalia — small improvements, big challenges December 31, Waxaana cadaatay hada in lasoo bandhigay Dastuurkii runta ahaa ee ay qortay gabadha Jamayka u dhalatay iyo ninkeeda Itoobiyaanka ah, waxana hada la qorshaynayaa in Dastuurka Soomaaliya lagu daro in diinta Kirishtaanku ay ka mid tahay diimaha rasmiga ah ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay dastuutka caalamka laga diiday ruux labo somlia leh in uu dal hogaamiyo.
Macnaha erayga Rastafari Ras iyo Tafari. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1.
Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa soalia daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub.
Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka. Mar wax laga waydiiyay Bob Marley oo aamin sanaa diintan, sida uu ugu sharxi karo dadka macnaha Rastafari wuxu yiri “waxan ku oran lahaa dadka, xaqiiqsada oo ogaada in mudane, boqor Xeyle Salaasaha Itoobiya uu yahay Ilaaha Weyn, Kitaabka Injiil ayaa sidaas yiri, hadalkana wargeyska Babylon ayaa sidaas yiri, anaga oo ilmihii ah ayaa sidaas niri. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha.
Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril. Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka.
Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka somalla ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh.
Dastuuria ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dastuur,a.
Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Soma,ia 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha. Dhanka kale, xiritaanka shirka maanta ayaa Wakiilka Xog-hayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalladeeda ku aaddan la-imaatinka jadwal ku dastuurka cusub. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Kenya, halganka xooggan oo lagu doonayey in lagu badallo dastuurka, ayaa ka socday tan iyo horaantii sagaashameedyadii, tiina afti loo qaaday so,alia cusub ayey shacabku diideen. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.